လက်ကားလေးရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်လက်ဖက်ရည်ဖယောင်းတိုင်ထုတ်လုပ်သူနှင့်ရောင်းချသူ |Wuxi ပြည်ထောင်စု
1-912၊ #39 Bldg၊ Liandong U Valley၊ No.100 Fengbin လမ်း၊ Wuxi City၊ PRCHINA
Wick: ခဲအခမဲ့ 100% ချည်သား
ထုပ်ပိုးမှု-6ပစ္စည်း/ပုံး
လိုဂို- စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်နိုင်သော၊ OEM သို့မဟုတ် ODM
1.ကွဲပြားသော ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းနှင့် သက်ရှိထင်ရှားရှိသော ရှားစောင်းလေး၏ ပုံသဏ္ဍာန်၊ Classical ပုံစံ ရှားစောင်းလေး၏ စတိုင်။
2.ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် ဘေးကင်းသည်- ဖယောင်းတိုင်များအားလုံးသည် အရည်အသွေးပြည့်မီသော paraffin ဖြင့်ပြုလုပ်ထားပြီး၊ ခဲ-မပါသော ဝါဂွမ်းမီးခိုးများသည် အနက်ရောင်မီးခိုးများ မထုတ်လုပ်နိုင်ဘဲ၊ အဆိပ်အတောက်မရှိ၊ လောင်ကျွမ်းခြင်းမရှိဘဲ တိတ်ဆိတ်နေကာ tealight ကိုင်ဆောင်ထားသူများသည် အရည်များပြည့်လျှံခြင်းမှ ကာကွယ်ပေးပါသည်။
3. မီးလောင်ကျွမ်းသောအခါတွင် လတ်ဆတ်သောရနံ့ကို ပေးစွမ်းနိုင်ပြီး သင့်အခန်းအတွက် ရင်ခုန်စရာနှင့် ပေါ့ပါးသောလေထုကို ဖန်တီးပေးမည်ဖြစ်သည်။
4. အရည်အသွေးမြင့် ဖယောင်း၊ သဘာဝ ဖိုက်ဘာ Wicks၊ ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် လိုက်ဖက်သော၊ အလင်းရောင်၊ မီးတောက်မရှိသော။
5. ဤချစ်စဖွယ်လက်ဖက်ရည်မီးရောင်များဖြင့် ချစ်စဖွယ်အေးချမ်းသောပတ်ဝန်းကျင်ကို ဖန်တီးပါ။
အိပ်ခန်းများ၊ ထမင်းစားခန်းများ၊ ဧည့်ခန်းများနှင့် လန်းဆန်းသောလေယူလေသိမ်းလိုအပ်သည့်နေရာတိုင်းအတွက် ပြီးပြည့်စုံပါသည်။ဧည့်ခံပွဲအတွက် ဆီမီးပူဇော်ခြင်း။
ပြီးပြည့်စုံသော အိမ်ပူနွေးနွေး လက်ဆောင် ခရစ်စမတ်လက်ဆောင် နှစ်သစ်ကူး လက်ဆောင် ၊ ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများ၊
၎င်းတို့၏ အထူးပစ္စည်းများကြောင့်၊ ၎င်းတို့ကို နေရောင်ခြည်တိုက်ရိုက်မဖြစ်အောင် နှင့် အရည်ပျော်ခြင်းတို့ကို ရှောင်ကြဉ်၍ မှောင်ပြီး ခြောက်သွေ့သောနေရာတွင် ထားရန် ပိုကောင်းပါသည်။Tuyere မှာ ဖယောင်းတိုင်တွေ မတင်ဖို့ မမေ့ပါနဲ့။အသုံးပြုနေစဉ်အတွင်း ပြဿနာတစ်စုံတစ်ရာရှိပါက ကျွန်ုပ်တို့ထံ ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။
မီးလောင်နေသော ဖယောင်းတိုင်များကို မီးခံသေတ္တာပေါ်တွင် ကလေးငယ်များ လက်လှမ်းမမှီသောနေရာတွင် ထားသင့်သည်။မီးလောင်နေသော ဖယောင်းတိုင်ပုံးသည် ပိုပူလာမည်ဖြစ်သောကြောင့် မရွှေ့မီ မီးငြိမ်းပြီး အအေးခံရန် လိုအပ်သည်။မီးရှောင်ရန်၊ လူများရှိနေသောအခါတွင် အသုံးပြုပါ။ကျေးဇူးပြု၍ မျက်လုံး၊ အရေပြားနှင့် အဝတ်အထည်များနှင့် ထိတွေ့ခြင်းမှ ရှောင်ကြဉ်ပြီး အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များနှင့် ကလေးများ၏ လက်လှမ်းမမီသောနေရာများတွင် ထားပါ။အရည်များ မျက်လုံးထဲသို့ မတော်တဆ မျိုချမိပါက ကျေးဇူးပြု၍ အချိန်မီ ဆေးကြောပါ သို့မဟုတ် ရေများများ သောက်ပါ ဆေးကုသမှု ချက်ချင်းခံယူပါ။ဤထုတ်ကုန်သည် အရုပ်တစ်ခုမဟုတ်ပါ၊ အရွယ်ရောက်ပြီးသူအတွက်သာဖြစ်သည်။
1.ဤစက်မှုလုပ်ငန်းတွင် 10 နှစ်ကျော်အတွေ့အကြုံ။
2. ကျွန်ုပ်တို့တွင် ကျွမ်းကျင်လုပ်သားများနှင့် ကျွမ်းကျင်သော နည်းပညာရှင်များရှိသည်။
4. ထောက်ထားစာနာပြီး အထောက်အကူဖြစ်စေသော အဖွဲ့လိုက်လုပ်ဆောင်ပါ။
အရည်အသွေးမြင့် နိုင်ငံတကာစံနှုန်းများနှင့် ကိုက်ညီပါသည်။
ယခင်- အိမ်အလှဆင်ရန်အတွက် ဆင်စွယ်အဖြူရောင် ပူဖောင်းတုံးဖယောင်းတိုင်
နောက်တစ်ခု: Frosted glass ရနံ့ဖယောင်းတိုင်
1. OEM & ODM: လိုဂို၊ အရောင်၊ ပုံစံ၊ ထုပ်ပိုးခြင်းအပါအဝင် မတူညီသော စိတ်ကြိုက်ဝန်ဆောင်မှု
2. အခမဲ့နမူနာ- ကြွယ်ဝသော ထုတ်ကုန်မျိုးစုံကို ကမ်းလှမ်းပါ။
3. မြန်ဆန်ပြီး အတွေ့အကြုံရှိသော သင်္ဘောဝန်ဆောင်မှု
Frosted Silvery Mercury Glass Jar Candle
အနုပညာလက်ရာမြောက်သော ခရီးဆောင် Tin Candle...
Eco ဖော်ရွေသော ဝါးလက်ကိုင် အဝိုင်းခေါင်း ဝေ့စုတ်တံ
ယန်းကီးစတိုင် အိုးကြီးထဲက ခေါင်းလိမ်းဆီဖယောင်းတိုင်
သံပုံးထဲတွင် ပန်းပုဝါဖြင့် Citronella ဖယောင်းတိုင်...
လူကြိုက်များသောအရွယ်အစား အိမ်သုံး Magic Functional Non-Wov...
© မူပိုင်ခွင့် - 2010-2022 : All Rights Reserved.